Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waqtigii dheeraadka ahaa guul ka gaadhay Rennes oo ay ugu tagtay waddanka Faransiiska, waxaanay kusoo garaacday 2-1.
Gool uu daqiiqaddii 91aad u dhaliyey Olivier Giroud ayaa Chelsea ka caawiyey inay iska xaadiriso wareegga 16ka ee tartanka Champions League ee xili ciyaareedkan, kaddib markii uu shabaqa ku hubsaday kubbadda xilli kooxdiisa ay saarnayd culays weyn.
Chelsea ayaa gool la hormartay qaybtii hore, waxaana u dhaliyey Hudson-Odoi, hase yeeshee waxa goolka barbarraha ka daba keenay Guirassy iyadoo shan daqiiqadood oo kali ahi dhamaadka ciyaarta ka hadhsanaayeen, iyadoo ciyaartuna noqotay 1-1.
Daqiiqaddii koowaad ee waqtigii dheeriga ahaa ee ciyaarta lagu daray ayuu Olivier Giroud oo beddel kusoo galay guusha u xaqiijisay kooxdiisa.
Blues ayaa yeelatay 10 dhibcood, waxaanay noqotay kooxdii koowaad ee iska xaadirisay wareegga 16ka, halka ay Sevilla kaalinta labaad ku jirto iyadoo xilli dambe ka guuleysatay Krasnodar oo ay 2-1 kaga adkaatay.
Kooxda reer Spain oo haysata 7 dhibcood ayaa wali sugi doonta inay u baxdo wareegga xiga, waxaanay u baahan tahay inay guul kale kasoo hoyso kulamada labada ah ee u hadhay.
Kaydka: Kai Havertz, N’Golo Kante, Kepa Arrizabalaga, Olivier Giroud, Fikayo Tomori, Hakim Ziyech, Marcos Alonso, Emerson, Reece James, Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Willy Caballero.
Kaydka: Brandon Soppy, Clement Grenier, Faitout Maouassa, Warmed Omari, Georginio Rutter, Romain Salin, Adrien Hunou, Yann Gboho, M’Baye Niang, Flavien Tait, Lorenz Assignon, Romain Del Castillo.
Frank Lampard ayaa afar beddel ku sameeyey shaxdii uu kula ciyaaray Newcastle usbuucan. Difaac ayauu keenay Silva iyo Azpilicueta iyadoo kaydka uu dhigay James iyo Rudiger. Kanta iyo Ziyech ayaa iyaguna waayay boosaskooda waxaana kasoo hormaray Jorginho iyo Hudson-Odoi.
Shan daqiiqadood kaddib markii uu garsoore Bjorn Kuipers yeedhiyey siidhiga bilowga ciyaarta ayuu Hudson-Odo kubbad u hordhigay goolka oo bannaan weeraryahanka reer Germany ee Timo Werner oo isaguna lugta bidix ku laaday kubadda laakiin waxyar ayay sare uga kacday. Layaab iyo wax aan looga badanin Werner ayay ahayd sida ay kubaddani gool u noqon weyday.
Hudson-Odoi ayaa kubado kale khatar ku geliyey goolka Rennes, waxaase dedaal badan samaynayay oo orodkiisa iyo goysmooyinkiisa ka feejignaa difaaca.
Daqiiqaddii 25aad ayay Chelsea hoggaanka ciyaarta qabatay, waxaana kubbad uu Mount kasoo tuuray meel fog uu ka daba baxay difaaca Rennes, waxaanu kaga dheereeyey orod illaa uu goolhaye Gomis oo kusoo baxay ula dhowaaday, waxaanu si fiican ugu hubsaday shabaqa.
Laacibkan reer England ayay u tahay goolkii labaad ee uu ka dhaliyo saddex kulan oo Champions League ah oo uu kasoo muuqday xili ciyaareedkan.
Ben Chilwell ayaa laba kubbadood oo karoos ah kusoo tuuray xerada ganaaxa Rennes, waxaana middii labaad masaafo lix yard ah ka helay Mason Greenwood. Goolhaye Gomis ayaa si fiican u arkayay oo booskii ku habboonaa sii istaagay, waxaana toogashadii Mount oo lugta midig ahayd ay ku dambaysay inay koorne u baxdo.
FURSAD: Chilwell ayaa fursad siiyey Doku oo orod ku dilayay ciyaartoyda difaaca, waxaase la baxsaday Mendy oo kubbad halis badan ka badbaadiyey goolkiisa, kooxdiisii horena ka diiday inay shabaqiisa gaadhaan.
Qaybtii labaad ayay sare usoo kacday kooxda garoonkeeda joogtay ee Rennes, waxaana la qaban kari waayey Jeremy Doku oo wacdaro dhigayay.
Goolhaye Mendy iyo Zouma ayaa shaqo cajiib ah qabtay, waxaanay badbaadiyeen kubbado halis ahaa oo loo filanayay gool.
Frank Lampard oo culayska kooxdiisa arkay ayaa firfircoonaysiiyey khadka dhexe iyo weerarka, waxaanu keenay N’Golo Kante oo uu ku beddelay Mason Mount iyo Olivier Giroud oo isaguna yimid booskii Tammy Abraham.
Daqiiqaddii 74aad ayay Chelsea khatartii ugu weynayd gashay, waxaana kubbad koorne ahayd oo ka timid Bourigeuard madax awood badan ku qabtay Nyamsi balse Mendy ayaa booskiisa joogay oo mar kale sameeyey badbaado iyadoo kubaddii kasoo boodayna uu ku celiyey Nzonzi balse kubadda ayaa laynka bannaanka u baxday.
Havertz iyo Hakim Ziyech ayaa iyaguna beddel kusoo galay, waxayse la kulmeen madax-xanuun ah in kooxdooda uu wali sii saarnaa culays inkasta oo ay iyaguna fursado sameeyeen.
Daqiiqaddii 85aad ayay Rennes la timid goolka barbarraha, waxaana kubbad ka timid Bourigeaud shabaqa ku hubsaday Guirassy oo uu madaxiisa qaban kari waayey goolhaye Mendy oo aan wax fursad ah lasiinin.
Daqiiqaddii guusha: Olivier Giroud ayaa goolka guusha u dhaliyey kooxdiisa Chelsea daqiiqaddii 1aad ee waqtigii dheeraadka ahaa ee ciyaarta lagu daray, waxaanay sidaas Chelsea ugu dabbaal-degtay guusha.
choose between anxiety and impatience before the results are announced